» आकाशमा रमाउने यी ३ (बाबू, आमा र छोरा )को जीवन कथा: आखिर को हुन् ? एक पटक सबैले पढ्नै पर्ने आकाशमा रमाउने यी ३ (बाबू, आमा र छोरा )को जीवन कथा: आखिर को हुन् ? एक पटक सबैले पढ्नै पर्ने – हाम्रो खबर
आकाशमा रमाउने यी ३ (बाबू, आमा र छोरा )को जीवन कथा: आखिर को हुन् ? एक पटक सबैले पढ्नै पर्ने
कोठाका भित्ताभरि दर्जन तस्बिर छन् । नेपालको राष्ट्रिय ध्वजा’वाहक नेपाल एयरलाइन्सका सुरुवाती दिनदेखिकै जहाजका तस्बिरहरूले उनको का’र्यकक्षको शोभा बढाएको छ ।
सुन्धारास्थित नेपाल वायुसेवा निगमको चौथो तल्लामा रहेको उनको कार्यालयका भि’त्तामा सजिएका जहाजका फोटोबारे उनले भने, ‘ यो कोठामा पुरै हिस्ट्री छ’ ।
मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोम’बाट २ घण्टाको पैदल दुरीमा पर्छ एउटा सुन्दर बस्ती मार्फा । त्यहाँबाट राजधानी पुगेर पढ्ने पहिलो व्यक्ति थिए, यामप्रसाद जुहार्चन । सिद्धार्थ वनस्थलीबाट एसएलसी गरेपछि यमप्रसाद पाइलट तालिमका लागि अमेरिका गए ।
आमा सुमिली भने धरानकी हुन् । लामो समयदेखि हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कार्यरत उनी पनि पछि एयर होस्टेस भएर नेपाल वायुसेवा निगममा प्रवेश गरिन् । अर्थात या’मप्रसाद निगममा पाइलट भए, सुमिली एयर होस्टेस भइन् ।
कहिले यामप्रसादले उडाएको जहा’जमा सुमिली एयर होस्टेस हुन्थिन्, कहिले सुमिलीको ड्युटी परेको जहाज उडाउने पालो यामप्रसादको पर्थ्याे । मन न हो, एउटै संस्था (निगम) र उडानमा हुने लगातारको भेटले दुवैबीच प्रेम अङ्कुरायो । उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए ।
कहिलेकाहीँ विमान दुर्घटनाका समाचार आउँथे र दीपु डराउँथे । आफ्ना बाबु–आमा त्यो जहाजमा रहेनछन् भन्ने जानकारी पाएपछि उनी ढुक्क बन्थे।बाहिरबाट हेर्नेलाई लाग्ला, बाबु–आमा दुवै उड्ययन क्षेत्रमा भएपछि बालबच्चा बेलाबेला घुम्न पाइरहन्छन् । तर यामप्रसाद र सुमिली यति व्यस्त थिए कि,दीपुले परिवारसँग खासै घुम्न पाएनन् ।
यद्यपी,गर्मी र दशैँको विदामा भने उनी घु’म्न जान्थे । काठमाडौँ–पोखराको उडान परेको र बिदा पनि भएका बेला यामप्रसाद दीपुलाई काठमाडौँ लिएर आउँथे । गर्मीको बिदाभरि दीपु काठमाडौँमा रहन्थे । अनि, दशैँ बिदाका बेला बुबाले गर्ने पोखरा–जोमसोम उडानमार्फत् मार्फा फर्कन्थे ।